‘बुबा र पार्टीको विरुद्ध भाइलाई उपयोग गरियो’ – NepaliEkta
12 November 2020 22 November 2020 Nepaliekta	0 Comments
16828 जनाले पढ्नु भयो ।
अहिले केसीजीको अवस्था कस्तो छ ?
बुवा अहिले गम्भीर अवस्थामा उपचार गराइ रहनुभएको छ । यद्यपी डाक्टरहरुले खतरामुक्त भनेका छन् । तर, अवस्था सोचेजस्तो सहज पनि छैन । ८२ वर्षको वृद्ध शरीर, लामो समयदेखि पेटको रोगी, डायरिया, निमोनियासँगै कोरोना पोजेटिभ हुनु सामान्य कुरा होइन । एक त हामीले समयमै कोरोना संक्रमण भएको थाह पाउन सकेनौं । अब अस्पतालमा कोरोनासँगै अन्य रोगको पनि उपचार भइरहेको छ । कोरोना संक्रमित भएका कारण हामी नजिक जान र स्याहार सुसार गर्न पनि पाएका छैनौं । डाक्टरहरुले औषधि चलाइरहेका छन् । खतरामुक्त भनेका छन् । तैपनि अवस्था अलि जटिल नै भएजस्तो लाग्छ ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई के छ नि ?
चिकित्सकहरुका अनुसार उहाँलाई आज (बिहीबार) बिहान कोरोनाविरुद्धको रेम्डेसिभिर नामक औषधि दिइएको छ । राति निमोनियाको औषधि दिएको थियो । बुवासँग कुरा गर्दा मुख सुकेको र अलि अप्ठेरो भएको बताउनु भएको थियो । यद्यपी चिकित्सकले अवस्था खतरामुक्त नै रहेको र अवस्था सुधार हुँदै गएको बताएका छन् ।
बिरामी हुनुभएको कति भयो ?
बुवाको पेटसम्बन्धी समस्या पहिल्यैदेखि थियो तर खासै असहज भएको थिएन । हामी असोज २२ गते भैरहवा गएका थियौं । एक हप्तासम्म बिहान मर्निङ वाकमा निस्किएका थियौं । त्यतिबेला सम्म ठिकै थियो । एक हप्तापछि बुवाले शरीर गल्यो म त सक्दिन क्याहो भन्नुभयो । अनि ज्वरो र रुघाखोकी पनि लाग्यो । भैरहवामै एउटा मेडिकलमा उपचार गरियो । सिजनको ज्वरो ठिक भइहाल्छ भन्ने लाग्यो । तर ठिक भएन छाति दुख्न थाल्यो भन्नुभयो । त्यसपछि बुटवल लग्यौं र थप उपचार गर्यौं । तैपनि ठिक भएन । कोरोना पनि परीक्षण गरिएको थियो । निगेटिभ देखायो । त्यस अघि काठमाडौंबाट जाँदापनि कोरोना परीक्षण निगेटिभ नै आएको थियो । त्यसैले कोरोना संक्रमण छैन भन्नेमै हामी ढुक्क थियौं ।
तर, बुवाले खाना खान छोडेको करिब १५ दिन भइसकेको थियो । काठमाडौं आउनु अघिल्लो दिनदेखि त पानी पनि खान मन गर्नुभएन । त्यसैले तत्काल निर्णय गरेर मंगलबार (कात्तिक २५) गते काठमाडौं ल्यायौं । यहाँ भर्ना गर्नासाथ निमोनिया देखियो । हिजो (बुधबार) कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो ।
पार्टीले उपचारका लागि सहयोग आह्वान गरेको छ, यसप्रति परिवारको धारणा के हो ?
हाम्रो बुवा परिवारको मात्रै अभिभावक होइन, उहाँ पार्टी र देशकै अभिभावक हो । त्यसकारण पार्टीले उपचारका लागि सहयोग आह्वान गर्नु सकारात्मक हो ।
फेरि हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि सबल छैन, यो कुरा त सबैलाई थाहै छ । बुवा सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरिरहनुभयो । राजनीतिमा लागेर कहिल्यै धन सम्पत्ति कमाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभएन ।
यहाँ अस्पतालमा भर्ना गर्नासाथ तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्यो । अब कोरोना पनि देखिएपछि उपचार खर्च कति लाग्छ थाह छैन । उपचार पनि लामो समयसम्म चल्छ होला । परिवारलाई सहयोग गर्ने कान्छो भाइ (बिष्णु केसी) आफैँ बिरामी छ । औषधि खाइरहनुपरेको छ ।
परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणमात्रै नभएर उहाँ पार्टीकै अभिभावक भएका कारण पनि पार्टीको योजना र सल्लाहलाई नै हामीले परिवारको योजना मानेका छौं ।
तपाईंकै भाइ (सचित्र केसी) ले त बुवाको अवस्था सामान्य छ, यो जनमोर्चाको पैसा उठाउने मेलो हो भनेछन् नि त ?
उसले किन त्यस्तो लेख्यो मत अचम्ममा परेको छु । बुवाको अवस्था यस्तो छ । उसलाई घर परिवारको कुनै वास्ता छैन । घरमा पैसा पठाउने त परको कुरा दुई वर्षदेखि खासै सम्पर्क पनि गरेको छैन । त्यसलाई बुवा र पार्टी विरुद्ध कसैले उपयोग गरेजस्तो लाग्छ । त्यसको फेसबुक स्ट्याटसले कतिपयलाई भ्रम पनि परेको होला । तर ज जसले सचित्रलाई चिनेका छन्, त्यसप्रति कसैले वास्ता गरेको छैन र गर्नुपनि हुँदैन ।
फेसबुकमा अनर्गल लेखेर फोन स्विच अफ गरेर बसेको छ । बुवाको अवस्थासँगै भाइको व्यवहारले हामीलाई थप तनाव दिएको छ ।
त्यसले छरेको भ्रममा नपर्न म सबैसँग आग्रह गर्दछु ।
सचित्रलाई कसले र किन उपयोग गरेजस्तो लाग्छ ?
बुबाले राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि लिनुभएको अडान, भ्रष्टाचारविरुद्ध जीवनभर गरेको संघर्षबाट कैयौं मानिसहरु अत्तालिएका छन् । उनीहरुले चित्रबहादुर केसीको राजनीति सखाप पार्न पहिल्यैदेखि लागिपरेका हुन् । उहाँविरुद्ध दुष्मनहरुले आक्रमण गर्नु त स्वभाविकै हो । तर भाइलाई नै उपयोग गरियो जस्तो लाग्छ । उ त्यसरी उपयोग हुनुहुन्थेन । त्यसलाई कसले उपयोग गरेको होला भन्ने कुरामा हामी पनि छक्क परेका छौं ।
बिरामी जस्तो संवेदनशील अवस्थामासमेत कतिपय मानिसहरुले राजनीति गरेका छन् । सचित्रलाई नचिन्नेहरुले त उसको स्ट्याटस सेयर गरेर के हो ? भनिरहेका छन्, त्यो स्वभाविकै हो । तर जस जसले उसलाई चिनेका छन्, उसको व्यवहार थाह छ तिनिहरुले समेत उछालिरहेका देख्दा दुःख लागेको छ ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकी छोरी भानु जिसीसँग युगदर्शनका सम्पादक विद्यानाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
← जालन्धरमा ४२औं स्थापना दिवस मनाइयो
अध्यक्ष केसीको उपचार खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने, राजमोले रोक्यो आर्थिक संकलन →
20 November 2019 22 November 2019 Nepaliekta 0
भारतमा नेपाली मजदुरहरुका समस्या झनै बढेर गएका छन्
3223 जनाले पढ्नु भयो । बुटवल । जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । फागुन ८ र
23583 जनाले पढ्नु भयो । अजय रेश्मी फरीदावाद, १४ फरवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज अन्तर्गत रहेको
7843 जनाले पढ्नु भयो । धर्मराज शर्मा कोट्टयाम केरला, २१ फेबु्रवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कोट्टयाम
9503 जनाले पढ्नु भयो । खिमराज चालिसे (चंडिगढ) बाहिर क्रान्तिकारी, भित्र स्वार्थको भकारी हुन्छ। त्यो नै वर्गीय आन्दोलनमा अवसरवादी हुन्छ।।
3155 जनाले पढ्नु भयो । हैदरावाद (भारत) ।। स्वर्गद्वारी नगरपालिका तापा–७ प्युठान घर भई हाल दाङ भालुवाङको पिपरीमा बसोबास गर्दै